I-Sanctuary Cottage - I-Volcano Rainforest Retreat - I-Airbnb
I-Sanctuary Cottage - I-Volcano Rainforest Retreat
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jennifer And Rob
U-Jennifer And Rob Ungumbungazi ovelele
Ukuze uthole okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele kwendawo yokulala ye-Big Island B&B evalelwe ekujuleni kwehlathi lemvula lentaba-mlilo, hlala endaweni yethu encane yothando eyihexagon yomsedari, egoniwe ama-fern esihlahla esiluhlaza kanye nenkungu ye-ethereal.
Sicela uqaphele ukuthi izintela zizodingeka lapho ufika. Izintela, ezihlukene nezindleko zegumbi le-Airbnb kanye nezindleko zesevisi, aziqoqwa yi-Airbnb. Izintela ezizokhokhwa lapho kungena i-General Excise Tax engu-4.71% kanye ne-Transient Accommodation Tax engu-10.25%.
Izungezwe Ihlathi Lemvula Lomdabu laseHawaii. Itholakala eduze kwe-Hawaii Volcanoes National Park.
Ngena endaweni yangaphakathi yesitayela sezwe lase-Japan esondelene kakhulu namatafula aphansi, okokulala kwe-indigo namakhushini aphansi. Izicabha zikaShoji zivulekele endlini yangasese encane enezingubo ezithokomele namathawula okugeza. Nethezeka ezihlalweni ezihlezi eduze kwendawo yomlilo yegesi noma uphumule embhedeni wendlovukazi ugqolozele phansi kuya kumafasitela engilazi ophahleni futhi ujabulele ukubukwa kwehlathi okujabulisayo. Ekukhanyeni kwasekuseni okuhlungiwe, jabulela indawo encane yasekhishini futhi ujabulele isidlo sasekuseni esiyimfihlo esihlinzekwe ngayizolo.
Iba munye nemvelo endlini yokugezela yangasese eneshawa yangaphandle ne-o’furo eyenziwe ngesandla (ibhavu yomdabu yase-Japanese). Gxila kulwazi lwe-Volcano ye-primal nengcwele. Ilungele izithandani noma abangashadile abajabulela izindawo ezincane, ezisondelene kanye nokuhluka kokugeza ngaphandle kwehlathi lendabuko. Itholakalela izindawo zokuhlala zokuzindla uwedwa endaweni yodwa.
Indawo yasemaphandleni eduze kwedolobhana elihle futhi ngaphandle nje kweHawaii Volcanoes National Park ikhaya leKilauea Volcano.
Ibungazwe ngu-Jennifer And Rob
Amahora okusebenza ango-9am-5pm
Ngemuva kwamahora ukusekelwa komakhalekhukhwini kusuka ngo-5pm-9am
UJennifer And Rob Ungumbungazi ovelele